Factory mpanamboatra stillage sy vy - China Stillage sy mpanamboatra kaontenera vy, mpamatsy
Warehouse Auto faritra fitehirizana Wire harato stackable mamoritra vy Cage fitoeran-javatra
Cage Metal azo raikitra no ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiara ho an'ny fitaovana antonony hatramin'ny lanjany mavesatra, toy ny faritra mandeha amin'ny fiara, toy ny kapila vita amin'ny frezy, taratra radiatera ary singa hafa. Afaka mitahiry amin'ny fitoeran'entana na mametraka gorodona 1-4 mba hahomby kokoa amin'ny trano fitahirizana Product Detail Material Q235 vy External size 1140 x 1140 x 545mm (LxWxH) na namboarina habe anatiny 1050 x 1050 x 385mm (LxWxH) habe 1150 x 1150 x H250mm Load capacité 1000kg na Load namboarina ho 20FT container 8 ...
Bara fandefasana vy ampiasaina ao Benz ho an'ny faritra mandeha amin'ny fiara
Stackable Metal Box dia tanjaka avo lenta, mahomby amin'ny habakabaka, mahomby, mora entina ary mamoaka tranom-borona. Ampiasaina betsaka amin'ny fikirakirana fitaovana, lojika ary fitehirizana fitaovana, indrindra ho an'ny faritra mandeha amin'ny fiara, kojakoja sy kojakoja fanamoriana, fitaovana, milina, elektronika, et. Ity boaty vy ity dia afaka mamonjy ny vidin'ny fitaterana, ny vidin'ny asa ary ny vidin'ny fitahirizana trano fitehirizana. Detaly Product Product Product lovia metaly simika lovia mpanelanelana be volo IBC Material Mild Steel Wire Q235, Tube Tube, Angle ...
Filaharana azo ajanona ao amin'ny indostrian'ny Automotive
Stackable Steel Box dia iray amin'ireo kaontenera indostrialy malaza, manana ny asan'ny pallet sy cage. Ampiasaina betsaka amin'ny fikirakirana fitaovana, lojika ary fitehirizana fitaovana, indrindra ho an'ny faritra mandeha amin'ny fiara, kojakoja sy kojakoja fanamoriana, fitaovana, milina, elektronika, sns. Afaka mitahiry amin'ny fitoeran'entana na mametaka takelaka 1-4 hahatonga ny trano fitehirizana hahomby kokoa. Product Detail Material Q235 vy habe ivelany 1140 x 1140 x 545mm (LxWxH) na namboarina habe anatiny 1050 x 1050 x 385mm (LxWxH) Fo ...
Heavy Duty Warehouse Spare Parts Stackable Steel Pallet Cage Stillage
Cage Metal azo alaina nohamafisin'ny bara vy matanjaka (tariby vy Q235 mahazatra iraisam-pirenena), ny tongotra nohitsakitsahin'ny tongotra eo ambany mba hahazoana antoka ny tsindry antonony sy hampitombo ny firaisankina. Ny vavahady fidirana eo aloha dia manamora ny fizahana entana na dia apetraka aza. Izy io dia azo ampiharina amin'ny faritra misy ny fiara, fanodinana milina, fitaovana elektronika, indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro, fivorian'ny indostrian'ny simika ary ny famokarana zavamaniry, ny fizotry ny vokatra sy ny lisitry ny vokatra. Product Detail Material Q235 vy ...
Tavoahangy azo ampiadiana Gitterbox azo amboarina
Foldable Rigid Container dia antsoina koa hoe Stillage, izay be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fananganana sy ny indostrian'ny fiara. Ny vokatray dia novokarin'ny milina fantsom-bozaka mandeha ho azy sy ny robot fanamafisam-peo mandroso, noho izany ny kalitaon'ny welding dia tsy miova ary feno, tena tsara amin'ny endrika ivelany ary tsy misy lasitra tsy hita. Product Detail Product Product Heavy adidy ambony kalitao gitterbox matevina mafy fitoerana fitoeran-javatra matevina Material malefaka vy tariby Q235, Tube Tube, Steel Steel, Flat Bar Exterior Dimens ...